Page-5 All Products - Hobby Carbon CNC Technology(Shenzhen) Limited
I-Aluminium efakwe intambo yomshini wesifazane
Professional Factory Male Female Aluminium Standoff
I-M3 aluminium anodised standoff
Imikhiqizo yokuthengisa entsha eshisayo eshisiwe yowesifazane
I-M3 Knurled standoff Aluminium ingxubevange yemibala ehlukahlukene
Ukulungiswa kwe-cnc eyenziwe nge-aluminium kuma-M3
Okwenziwe ngokwezifiso ukhiye we-hexagon socket bolt cap aluminium Isingeniso Somkhiqizo Isikali se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Imvamisa esetshenziswa ekhaya nasendlini yamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi neminye imboni yemishini. 1. Amandla...
Ikhaya IDepho Aluminium Socket & Allies Screws Isingeniso Somkhiqizo Isikali se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Imvamisa esetshenziswa ekhaya nasendlini yamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi kanye neminye imboni yemishini. Amabanga ahlukene...
I-Precision Custom Wholesale Knurled Aluminium Signoff eshibhile Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Okokuqala, ikholomu ye-rivet nati ingahlukaniswa ngokusebenzisa...